अब प्रतिगमन धेरै टिक्दैन : नेता महतो - Baikalpikkhabar
अब प्रतिगमन धेरै टिक्दैन : नेता महतो
काठमाडौं/ जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिगमन गयो भने धेरै समय नटिक्ने बताएका छन्। ‘होस पुर्‍याएर काम गर। जनताको अधिकार खोस्न पाइँदैन। संविधान मिच्न पाइँदैन,’ काठमाडौंमा आज जसपाले गरेको प्रदर्शनपछि उनले भने, ‘कि संविधानमै जे मनलाग्यो त्यही गर्ने लेख्नुपर्‍यो। यो प्रतिगमन टिक्दैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोतर्फ संकेत गर्दै नेता महतोले फेरि प्रतिगमन आएको बताए। पहिले राजाहरूले जस्तै अहिले ‘नयाँ राजा’हरूले प्रतिगमन गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘फेरि प्रतिगमन आयो। कति प्रतिगमन हो कति ?,’ महतोले भने, ‘प्रतिगमन जनताले कतिचोटि भोग्ने हो? संविधानमा प्रतिगामी गरिहाल्यो।’
संविधान बनाउँदा पनि ओलीले प्रतिगमन गरेको आरोप उनको छ। ‘पहिले राजाहरूले अहिले नयाँ राजाहरूले प्रतिगमन गरे। संविधान बनाउँदा पनि प्रतिगमन गरेका थिए। गोली हानेर संविधान बनाएको होइन ?,’ उनले भने। अहिले कुर्सीका लागि प्रतिगमन गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
‘यो कुर्सीका लागि प्रतिगमन हो। एउटा प्रतिगमनकारी हटाउँदा अर्को प्रतिगामी आयो,’ उनले भने। उनले आफूहरूको मागअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने पनि बताए। ‘आफ्नो लागि प्रतिगमन गर्ने ? कुर्सी जोगाउन प्रतिगामी कदम चाल्ने ?,’ उनले भने।
बिहिबार, १६ पुष, २०७७, बिहानको १०:५३ बजे